Abesifazane bakhuthazwe ngezamabhizinisi
ABESIFAZANE abebeyingxenye yomcimbi wokuvala inyanga yabesifazane iWomens Day Commemoration obuseMpangeni
NONTUTHUKO NGUBANE | September 5, 2019
KUNXUSWE abesifazane ukuba babe nesibindi bangene kwezamabhizinisi noma kunezinselelo eziningi.
Lokhu kushiwo emcimbini wabesifazane iWomens Day Commemoration obuseMpangeni Town Hall ngempelasonto.
Abesifazane bebandla laseLuthela eMpangeni, nosomabhizinisi bendawo bebehlangene kulo mcimbi ingqikithi yawo ebithi: Umthelela ngobuchwepheshe obusha kwezamabhizinisi abesifazane.
Umphrofethikazi uNomusa Dhlomo webandla iCovenant Fellowship Church International (CFCI), obengesinye sezikhulumi, uthe sekufike isikhathi sokuba abesifazane bayeke ukusaba bangene kwezamabhizinisi. “Okumele sikuqonde ukuthi asiziphileli thina nje manje kodwa isizukulwane esizayo kumele sizuze ngesakwenza sisaphila. Ukuqala amabhizinisi singabantu besifazane kwenza sikwazi ukushiyela imindeni yethu okuthize, okubambekayo. Noma zikhona izinselelo emabhizinisini kodwa kumele siwaqale.”
Uthe okunye okumele abesifazane baqikelele kukhona ukuthi bangagcina sebeyeka izinto abakholelwa kuzo ngenxa yemali.
“Kumele ube usomabhizinisi othembekile, uNkulunkulu uyamhlomulisa umuntu othembekile. Kusemqoka ukuba uNkulunkulu ummeme abe yingxenye yebhizinisi lakho. Futhi ungakuyeki okholelwa kukhona ngoba nakhu ufuna ibhizinisi ngezinye izindlela. Abantu bazohluleka ngisho ukubeka inani kuwena uma uqotho,” kusho uMphrofethikazi Dhlomo.
Kuvele ukuthi ziningi izindlela abesifazane abangangena ngazo kwezamabhizinisi abethathwa njenganzima, enziwa abesilisa kuphela njengoba sekukhona nobucwepheshe besimanje obenza izinto zibe lula.
UMfundisi Mbali Biyela, webandla laseLuthela, abebehlele lo mcimbi nokuhlanganyela nenkampani iJRD Consulting CC, uthe babona kusemqoka ukuba babe nendawo ephephile lapho abesifazane bezokwazi ukuhlangana bezocushisana, bakhulisane emikhakheni ehlukahlukene.
“Esazitshela khona ukuthi kuningi esingakwenza kube impumelelo uma sihlangana singabesifazane sifundisane, sicushisane,” kusho uMfundisi Biyela.
Kube nezinhlelo ezehlukene zokuthokozisa abesifazane.